जनस्वास्थ्यको सवाल र डा. केसी- सम्पादकलाई चिठी - कान्तिपुर समाचार
चिकित्सा क्षेत्रका समस्याको विषयमा आवाज उठाएर पटक–पटक आमरण अनशन बस्नुहुने डा. गोविन्द केसीका जायज माग पूरा गर्न किन सरकार अटेर गरिरहेको छ ?
डा. केसीका कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छ जस्तो लाग्दैन । उहाँ जनताको वास्तविक आवाज उठाएर अनशन बसिरहनुभएको छ । नेपालमा त्यसै त पहुँच हुनेहरूको वर्चस्व र शासन गर्ने स्थान हो, त्यसमा पनि दुर्गम विकटमा जन्मेर आर्थिक स्थिति बलियो नभएकाको चिकित्सक बन्ने कुनै आधार नै छैन । सबै कुरामा क्षमतावान छ, तर आर्थिक स्थिति कमजोर छ भने राम्रो विषय लिएर पढ्न सक्दैनन् । केही पार्टीका अन्धभक्तहरूलाई लाग्न सक्छ, डा. केसीले त्यतिकै अनशन बसिरहेका छन् । त्यो तिनको भ्रममात्र हो । डा. केसीले गरिब नेपालीको आवाज उठाइरहनुभएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्र नभई सबै प्रदेशमा
मेडिकल कलेजहरू खोल्नुपर्छ र शुल्क पनि घटाउनुपर्छ भन्ने माग के नराम्रो हो ?
किन मेडिकल कलेजको लागि सम्बन्धन दिँदैछन् ? गरिबमुखी स्वास्थ्यका लागि होइन । कमिसन र नाफाखोरका लागि यो काम भइरहेछ । कमिसनको लोभमा परी पहुँचका आधारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धन दिनु हुँदैन भन्ने डा. केसीको माग जायज हो । पछिल्लो समय उहाँलाई राजनीतिक ट्याग लगाइँदैछ र भनिंँदैछ, उहाँ कांग्रेसले उचालेर अनशन बसिरहनुभएको छ भनेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि मन्त्री र उहाँका कार्यकर्ताहरू भन्दैछन् । के कांग्रेसले सरकार चलाएको बेला केसी अनशन बसेका थिएनन् र ? प्रश्न गर्न मन लाग्छ, डा. केसीको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ छैन । समग्र नेपालीको स्वास्थ्यमा पहुँच पुगोस् भनेर आवाज उठाउनुभएकोले चाँडो उहाँको माग पूरा गरी अनशन रोक्नु सरकारको दायित्व पनि हो ।
मंगलबार प्रकाशित राजेन्द्र महर्जनको ‘मेडिकल लुटको प्रतिरोध’ले हाम्रो मेडिकल क्षेत्रमा भइरहेको विकृति र विसंगतिको यथार्थ झल्काएको छ । यस्तै विकृति र विसंगति हटाउन भनी डा. गोविन्द केसी पुनः १७ औंपटक डडेलधुरामा पुगेर अनशन बसकेका छन् । १६ औं अनशनसम्म आइपुग्दा सरकार र उनीबीच सम्पन्न समझदारी कार्यान्वयन हुन सकेन । जब दैव नै दाहिने हुँदैन भने असफलता हुने नै भयो । यहाँ दैव भनेको सत्ता र व्यवस्था हो । जसको हातमा सत्ता छ, उही दानव बनेका छन् । त्यही दानव बनेपछि कसको के लाग्छ र ?
जनता जनार्दन भन्नु गफमात्रै भएको छ । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिको हविगत के होला भन्न सकिँंदैन ? अब गिरिराजमणिले गृहलाई पत्र लेख्छन् । गृहले कलेजलाई पत्र लेख्छ । यत्तिकैमा कुरा विलाएर जान्छ । भगवानसँग प्रार्थना छ, यस बीचमा केसी नबिलाउन् । जहाँ तुरुन्त एक्सनको आवश्यकता छ, त्यहाँ पत्राचारलाई के बुझ्ने ? मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू पैसा फिर्ता नगर्ने हाकाहाकी बताइरहेका छन् । कस्तो लुट ? जनतालाई कहिल्यै सुख भएन । जनताका सुखका दिन कहिले आउने खै ?
चीनको सहयोगमा कोटेश्वर–कलंकी खण्ड चक्रपथ सडक विस्तार कार्य सम्पन्न भई नेपाल सकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ  । २०१७ जुलाईमा सम्पन्न गर्नेगरी सम्झौता भएकोमा भूकम्प, नाकाबन्दी तथा सरकारको समन्वय अभावका कारण पटक–पटक म्याद थप्नुपर्दा ढिलाइ भएको हो  ।
चीन सरकारबाट कलङ्की–कोटेश्वर ८ लेन सडकको निर्माण पूरा नहुँदै हस्तान्तरण भएको जनगुनासो छ । हालसम्म पनि बल्खु–कलङ्की १.५ किलोमिटर सडक खण्डको (दायाँतर्फको सर्भिस लेन लगायत) निर्माण कार्य सकिएको छैन । चक्रपथ सुधार आयोजनाका अनुसार कलङ्कीदेखि बल्खुसम्मको सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा सडक विभागको हो । त्यही भाग आजसम्म जस्ताको तस्तै छ । जसले गर्दा विगतजस्तै मौसमी हिलो वा धुलोको समस्या यथावत छ । हस्तान्तरण भइसकेको सडकको या हविगत लज्जास्पद हो ।
सडक विज्ञहरूका अनुसार चक्रपथ सहरी सडकको रूपमा नभई एक्सप्रेस वेजस्तो भएको र सडकमा आवश्यक जेब्राक्रस, सर्भिस ट्रयाक र आकाशेपुल, ट्राफिक लाइट लगायत धेरै क्रुटि छन् । हाल चीनकै सहयोगमा कलंकी–चावहिल खण्ड चत्रपथ सडक विस्तार कार्यको लागि काम प्रारम्भ भएको छ । यसमा कोटेश्वर–कलंकी खण्डको जस्तो त्रुटि नदोहोरियोस् ।